Auteur Solo RazafyPublié le 14 mars 2011 15 mars 2011 Catégories Politique
7 pensées sur “Tsy misy avy amin’ny TIM sy ankolafy Ravalomanana mankany amin’izany governemanta izany hoy ny filoha Ravalomanana!”
Misaotra betsala Atoa Filoha nanome fanazavana matotra a!.. Tena ilaina tokoa izany amin’ny afitsok’ireo mpamadika tanindrazana ireo!
Manome toky ny filoha Marc RAVALOMANANA ny MA.MI.FI, GTT Chine,ny GTT Phillipines, ny GTT international GE, ny FRDL, ny fikambana KA SAHIA, ny ary nt ANKOLAFY TELO fa mbola mihaino sy manaraka tsara antsakany sy an-davany ny baikon’ny filoha Marc RAVALOMANANA.
Ny Riana Vona dit :
Isaorana be dia be ny Filoha Ravalomanana nanome amin’ny antsipiriany ny fizotry ny famahana ny krizy. Ilaina dia ilaina tokoa, indrindra amin’izao mampamahofaho ny sain’ny Malagasy izao no manome fanazavana hentitra sy mafonja ohatra an’ireny. Mila miara-mientana daholo isika rehetra tonga saina fa any amin’ny lalana tsy izy zao itondran’izao fitondrana eo zao dia mila mafanohana satria tena marina tokoa fa mila faharetana ity raharaha ity fa tsy azo atao maimaika satria mila fongorina tanteraka ny toetsaina mambotry firenena toy ny fitiavam-bola, fitadiavan-tseza ary ny fitadiavana tombontsoa manokana fa tsy ho an’ny vahoaka.
Tanora ny tena, ary amin’ny saina tsy miangatra ary mifoha tsara no itenenako fa tsy mbola misy filoha manam-pahendrena sy mahatsinjo lavitra ohatra ny filoha Ravalomanana. Ny tortra ilain’ny olona tokony ho Filoha mantsy dia ny fananana ny maha izy azy, matotra ary manana vision lavitra be. Ny ankamaroan’ny olona manao politika eto amintsika dia tsy mahatsinjo afatsy ny androany sy ny rahampitso ary ny eo ambany orony. Raha noana izy androany dia mitady hevitra hihinanana androany sy rahampitso fa tsy mitady ny hihinanana maharitra ary mahasoa sy mahasalama. Zany no mahatonga ny olona mandroba sy mangalatra. Hevitry ny olona kamo hiasa zany.
misaotra tompoko nanazava.
Rehefa tsy zaka ny rongony ravalonandra dia ajanony ah! inona daolo ireo Tim ao anaty governemanta ireo? sa mitsentsina inona ny masonao?
odosy e (bis)
Précédent Article précédent : Video – Manoela, Magro 14/03/2011
Suivant Article suivant : Un coup d’état reste un coup d’état !